Fitaterana any Etazonia | Fitsangatsanganana tanteraka
Etazonia dia firenena lehibe izay mifandray tsara ao anaty amin'ny fomba fitaterana samihafa toy ny lamasinina, ny fiaramanidina, ny fiara ary ny bus.
Ny tambajotram-pitaterana any Etazonia dia tena mahomby amin'ny ankapobeny ary mamela anao hitety ny firenena milamina sy haingana. Raha mikasa ny ho any Etazonia ianao ary te hahafantatra ny fomba ahafahanao mifindra amin'ny morontsiraka ka hatrany amorontsiraka dia aza hadino ity lahatsoratra manazava ity inona ny fitaovam-pitaterana any Etazonia.
1.1 Rahoviana no mandeha amin'ny fiaramanidina any Etazonia?
1.2 Seranam-piaramanidina azonao andehanana
2.1 Inona no ilaina raha mitondra fiara any Etazonia?
2.2 Inona no tokony ho fantatrao raha hitondra any Etazonia ianao?
3 Fitateram-bahoaka any Etazonia
3.2 Manao ahoana ny lamasinina any Etazonia?
3.3 Fitsangatsangana inona no hatao amin'ny lamasinina any Etazonia?
3.5 Inona ireo orinasam-piaramanidina lehibe?
Ny fiaramanidina no fitaovam-pitaterana mety indrindra hifindra ao amin'ny firenena amin'ny fanjakana iray satria malalaka sy azo itokisana ny tambajotram-sidina nasionaly miaraka amin'ny sidina isan'andro an'arivony, seranam-piaramanidina marobe ary seranam-piaramanidina an-jatony. Ny ankamaroan'ny tanàna lehibe dia manana seranam-piaramanidina iray farafaharatsiny misy sidina mivantana sy misy fifandraisana.
Tena midadasika ny firenena, ka raha te-hiala morontsiraka sy morontsiraka ianao amin'ny fotoana fohy indrindra dia tsara kokoa ny mitondra fiaramanidina satria enina adiny enina no latsaky ny dia raha ampitahaina amin'ny dia andro maromaro izay mandeha lamasinina na fiara.
Rahoviana no mandeha amin'ny fiaramanidina any Etazonia?
Raha mitady hitahiry vola amin'ny tapakilan'ny fiaramanidinao ianao, ny zavatra tsara indrindra tokony hatao dia ny drafitra mialoha ny dianao. Taloha dia nanandrana nanala ireo seza be loatra ny seranam-piaramanidina tamin'ny minitra farany, noho izany dia voatery niandry ela ianao vao nahazo tapakilan-drivotra mora. Saingy, androany dia niova ny toe-javatra ary misy ireo kaompaniam-pitaterana an-tserasera izay manolotra vidiny tsara kokoa ho an'ny mpandeha matetika.
Amin'ny fotoana sasany toy ny fialantsasatry ny lohataona, fahavaratra na alohan'ny fialantsasatra sy ny fialantsasatry ny banky, ny fiandrasana hatramin'ny andro farany hahazoana tapakila fiaramanidina dia mety lafo satria vanim-potoana be izao ary lafo kokoa ny mandeha fiaramanidina any Etazonia. Raha manararaotra mandeha any Etazonia ianao amin'ny vanim-potoana ambany, dia io no torohevitra tsara indrindra satria mora kokoa ny tapakilan'ny fiaramanidina. Mitovy amin'ny fitsangatsanganana amin'ny andro herinandro fa tsy amin'ny faran'ny herinandro. Amin'izany dia hitahiry vola bebe kokoa ianao.
Seranam-piaramanidina azonao andehanana
Ny sasany amin'ireo zotram-piaramanidina miasa any Etazonia dia: American Airlines, Delta Air, United Airlines, US Airways, Skywest Airlines, Southwest Airlines, Hawaiian Airlines na Virgin America, sns.
Ny fanjakana rehetra ao amin'ny firenena dia manana seranam-piara-manidina marobe izay manidina amin'ny tanàna isan-karazany isan'andro. Raha ny marina dia manana seranam-piaramanidina anatiny 375 i Etazonia.
Rehefa mandeha manodidina an'i Etazonia amin'ny fialantsasatra ianao dia maro ny mpandeha no misafidy ny fiara satria mety ho traikefa nahafinaritra izy io. Ary izany ve iray amin'ireo fitsangantsanganana malaza indrindra eto amin'ny firenena ny Route 66 fantatra ihany koa amin'ny hoe "ny làlambe lehibe any Etazonia."
Manodidina ny 4.000 kilaometatra ny halavany, ny Route 66 dia miampita ny firenena avy any atsinanana ka hatrany andrefana amin'ny alàlan'ny fanjakana valo (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona ary California) hatrany Chicago ka hatrany Los Angeles Ny fanaovana ny làlana amin'ny fiara na moto no dia nofinofisin'ny olona maro. Na izany aza, Raha hivezivezy eran'i Etazonia amin'ny fiara dia tsy maintsy hainao ny mitondra fiara any satria mety tsy hitovy amin'ny an'ny firenenao ny lalàna ao aminy.
Inona no ilaina raha mitondra fiara any Etazonia?
Raha mitsangatsangana ianao, amin'ny ankamaroan'ny fanjakana dia mila fahazoan-dàlana iraisam-pirenena ianao. Angamba rehefa mandeha manofa fiara ianao dia tsy hangataka izany fa ny mitondra azy tsy mankarary mihitsy satria mora be ilay izy.
Ohatra, amin'ny tranga mahazo an'i Espana dia tsy maintsy manana fahazoan-dàlana mitondra fiara ianao ary azo atao haingana amin'ny Internet ny fomba. Ny hany ilainao dia ID elektronika, fenoy ny taratasy fangatahana fahazoan-dàlana sy fandoavana ny sarany. Roa andro aty aoriana dia azonao atao ny mandray izany any amin'ny biraon'ny fifamoivoizana manolotra ny karapanondronao hahafantarana anao sy ny sary miloko 32 x 26 mm ankehitriny. Raha vao navoaka, ny fahazoan-dàlana mitondra fiara iraisam-pirenena dia manana fe-potoana maharitra herintaona.
Aza adino fa ny manofa fiara any Etazonia ny taona farafahakeliny takiana dia 21 taona, na dia any amin'ny fanjakana sasany aza dia mety ho 25 taona izany.
Inona no tokony ho fantatrao raha hitondra any Etazonia ianao?
Na dia firenena manana fomban-drazana Anglo-Saxon aza ianao, any Etazonia dia mitondra eo ankavanana ianao, amin'ny lafiny iray ihany amin'ny ankamaroan'ny firenena eropeana sy Espana. Na izany aza, tsy maintsy tadidintsika fa ny fanjakana tsirairay avy dia mety manana fitsipika mifehy ny fifamoivoizana. Ka, Alohan'ny hanombohanao mitondra fiara dia tokony hahalala momba ny fambara amin'ny arabe sy ny fetran'ny hafainganam-pandeha any amin'ireo fanjakana hotsidihinao ianao.
Etsy ankilany, Etazonia dia firenena manana faritra midadasika misy tany kely onenana izay manjaka ny natiora, ka raha tsy fantatrao ny tany dia mora ny fihemorana hiseho ary ho very. Mba hisorohana an'io, raha hanofa fiara any Etazonia ianao, dia alao antoka fa mitondra GPS izay manavao ny sarintany ianao.
Fitateram-bahoaka any Etazonia
Ny safidy hafa hitety an'i Etazonia dia ny lamasinina. Safidy tsara io raha manana fotoana be dia be ianao, raha tsy manana fahazoan-dàlana mitondra fiara iraisam-pirenena na raha tsy te-hanasarotra ny fiainanao amin'ny GPS sy ny lalana rehefa manofa fiara. Inona koa, Raha misafidy ny lamasinina hivezivezy any Etazonia ianao, ny tombony dia ny ahafahanao mankafy ny velaran-tany mahavariana (ahitra goavambe, tendrombohitra avo ary vohitra mahafinaritra) raha mandehandeha mipetraka ianao.
Any Etazonia, izay manome an'ity serivisy ity dia Amtrak, mpandraharaha ny zotram-pirenena izay mampifandray an'i Amerika Avaratra amin'ny alàlan'ny rafitr'ireo zotra mihoatra ny 30 izay mandeha any amin'ny toerana 500 mahery any amin'ny fanjakana 46 sy Washington DC ny lamasinina.
Misaotra ireo fifandraisana samihafa misy eo amin'ireo tanàna lehibe any Etazonia, raha manapa-kevitra ny handeha amin'ny lamasinina ianao dia afaka mandeha lamasinina mankany New York, Philadelphia, Boston, Chicago, Washington DC, Los Angeles ary San Francisco. Ny tanàna hafa ao amin'ny firenena dia mety manana fifandraisana kely amin'ny làlan-kaleha na amin'ny làlan-kaleha ho an'ny fivezivezena manodidina ny afovoany.
Ary koa, tanàna maro ao amin'ny firenena no manana rafitra fiaran-dalamby an-tanàn-dehibe izay matetika manome fifandraisana amin'ny gara eo an-toerana ary mihazakazaka eo anelanelan'ny tanàna sy ny manodidina azy.
Manao ahoana ny lamasinina any Etazonia?
Ny ankamaroan'ny fiarandalamby Amtrak dia manana seza malalaka be hamelarana ny tongotrao sy hiala sasatra, miaraka amin'ny Wi-Fi, kabine, ary sakafo maimaimpoana. ankoatry ny tolotra hafa. Ankoatr'izay, ho an'ireo fitsangatsanganana lavitra dia lavitra ireo dia misy sarety miaraka amin'ny efitrano fatoriana.
Fitsangatsangana inona no hatao amin'ny lamasinina any Etazonia?
Anisan'ireo zotra natolotr'i Amtrak ho an'ny mpandeha dia misy roa izay, noho ny maha-tokana azy, dia mety ho traikefa tena mahaliana tokony hatao: ny fiaran-dalamby California Zephyr (izay manaraka ny làlana izay nataon'ireo mpikaroka volamena miankandrefana namakivaky ireo fari-tanàn-tany kanto 7) na ny fiaran-dalamby Vermonter (hijerena ireo endrika mahafinaritra any New England, ireo tanàna manan-tantara ary ireo fiangonany misy hantsana fotsy).
Ny iray amin'ireo fitaovam-pitaterana be mpampiasa indrindra any Etazonia hamindra ny firenena dia ny aotobisy. Ny antony hisafidianana azy dia maro: orinasa marobe isan-karazany izay manolotra ny serivisy miaraka amin'ny vidiny amin'ny teti-bola rehetra, fifandraisana tsara eo amin'ny tanàna maro sy fiara madio, milamina sy azo antoka.
Ny ankamaroan'ny tanàna lehibe dia manana tamba-jotra bus eto an-toerana azo itokisana, na dia voafetra aza ny serivisy amin'ny faran'ny herinandro sy amin'ny alina.
Raha tsy olana ny fotoana, ny bisy dia mety ho fomba iray tena mahaliana hijerena ny firenena satria ahafahanao mahita ireo toerana lavitra indrindra sy ny velaran-tany samy hafa izay tsy azo atao raha nanao fiaramanidina ianao.
Inona ireo orinasam-piaramanidina lehibe?
Greyhound: io no orinasan-bus lavitra lavitra izay manarona ny lalan'ny firenena iray manontolo sy Canada.
Boltbus: miasa any amin'ny faritra avaratra atsinanana indrindra (ny ankamaroan'ny fanjakana New England sy New York ankoatry ny toerana hafa).
Megabus: mampifandray tanàna maherin'ny 50 ity orinasa ity ary manana zotra mankany Canada ihany koa. Manana vidiny mifaninana izy io.
Vamoose: iray amin'ireo be mpampiasa indrindra izay mandeha matetika eo anelanelan'ny Washington sy New York.
Tsy fitaovam-pitaterana izay ampiasaina hamakivakiana tanàna fa ao anatin'ny toerana iray ihany. Ny tanan-dehibe rehetra any Etazonia dia manana fiarakaretsaka marobe. Amin'ny seranam-piaramanidina dia matetika no mora ny mandeha taxi satria maro ny mitondra mpizahatany mankany afovoan-tanàna, fa ny mifanohitra amin'izay dia somary manahirana kokoa ary matetika dia tsy mora ny mahita taxi maimaimpoana.
Mifanohitra amin'ny zavatra inoan'ny olona maro, ny taxi ao New York dia tsy lafo loatra. Ny salan'isan'ny dia mahazatra amin'ny alalàn'i Manhattan dia manodidina ny $ 10 fa raha somary maika ianao dia mamporisika anao aho hitady fomba hafa toy ny metro satria mety ho somary mikorontana ny fifamoivoizana ao Manhattan ary mirona ny fifamoivoizana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Fitaterana any Etazonia